चन्द्रागिरी केवुलकारमा घट्यो नमिठो घटना, सबै स्तब्ध — Imandarmedia.com
चन्द्रागिरी केवुलकारमा घट्यो नमिठो घटना, सबै स्तब्ध
काठमाडौं। काठमाडौंको थानकोटमा सञ्चालित चन्द्रागिरी केवुलकारमा चढ्न जोखिम बढेको छ। मंगलबार दिउसोको सार्वजनिक भएको घटनाले केवलकार चढ्न जानेहरु सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको हो।
यात्रा गरिरहेका कारहरु अचानक रोकिएको खबर छ। करिब ३ घण्टासम्म रोकिदा कोकोहोलो नै मच्चिएको बताइएको छ। तर यता चन्द्रागिरी केवल कार प्रशासनले भने बत्ती जादा करिब आधा घण्टा यस्तो भएको बताएको छ।
थानकोट प्रहरीका अनुसार केबल कारमा रोकिएकाहरुको उद्धारका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमाण्डमा २ जना चिकित्सक र नर्सहरुसहितको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। ३७ जनालाई रोकिन पुगेका केबलकारहरुबाट फर्काइएको थियो।
थानकोट प्रहरीका डीएसपी डिल्लीनारायण पाण्डेले ती ३७ जना चढेका कारहरु जेनेरेटरको बिजुली चलाएर फर्काउँदा एउटा कार फर्किने गति ज्यादै सुस्त भएकोले ३० मिनेट लागेको जानकारी दिए।
केवुलकारमा सवार ४० जना भन्दा बढी पर्यटकहरु केवुलकार बन्द भएपछि करिव आधा घण्टा केवुलकार भित्रै बस्न परेको कम्पनी व्यवस्थापनले जनाएको छ।
उनिहरुलाई इमर्जेन्सि उद्धार गरिए पनि जेनेरेटरमा समस्या देखिएपछि केही समय केवुलकार संचालनमा आउन नसकेको चन्द्रगिरी हिल्स प्रा. लि . का मेनेजर झलक पौडेलले प्रहार न्यूजलाई बताए।
दिउँसो करिव ३ बजे प्राविधिक गडवडीका कारण केवुलकार संचालनमा समस्या भएको भए पनि हाल पुन संचालन भइसकेको बताए। केवुल कार बन्द हुँदा चन्द्रागिरी डाँडामा करिव ४ सय जना रहेकोमा उनीहरु साँझसम्म सबै फर्किसकेको पौडेलले जानकारी दिए।
मर्मतसम्भार समयसमयमा गर्नुपर्नेमा त्यसलाई ख्याल नगर्दा यात्रु कारमै झुण्डिएर बस्नुपर्ने र निसास्सिने अवस्था आएको भन्दै पीडितहरुले केबलकारको निगरानीमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन्।
सोेहि विषयमा पत्रकार राजेन्द्र राज तिमल्सिनाले टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। चन्द्रागिरि केबुल कारमा मानिस झु ण्डिएको झुण्डियै भए। उद्धारमा प्रहरी गए, डाक्टर गए, नर्स गए । ३७ जना कारमा अड्किएका रहेछन्।
४ सय जना जति भालेश्वरमै रोकिए । तीन घण्टासम्म खैलाबैला मच्चियो। हिजो दिउसोको यो घटना आजसम्म पनि मिडियाले थाहा पाएनछ। चन्द्रागिरि अलि कोल्टे ठाउंमा रहेकोले पत्तो नभएको होला।तेस्तै, चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट संचालनमा आएको छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा पनि नयाँ भेरियन्टसहित दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि बन्द रहेको केवलकारलाई चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा बस्न जाने पाहुनालाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य मापदण्डको पालनासहित सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
हिल्सका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले कोरोनाका कारण पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसके पनि चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा जाने पाहुनालाई लक्षित गरेर केवलकार सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए।
आठ जना अट्ने केवलकारमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै चार जनासम्म आवतजावत गर्ने गरी केवलकार सञ्चालनमा ल्याएका छौँ,’उनले भने। १०० कोठा रहेको चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा अहिले दैनिक ४० देखि ५० कोठा पाहुनाले भरिँदै आएका छन्।
थानकोटदेखि चन्द्रागिरिसम्म केवलकारको दुरी साढे दुई किलोमिटर छ। गत वर्ष झण्डै ६ महिना बन्द रहेको केवलकार यो वर्ष झण्डै चार महिना बन्द रह्यो।
काठमाडौं उपत्यकाको मनोरम दृश्य देखिने चन्द्रागिरिमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक निर्माण गर्नुका साथै भालेश्वर महादेवको मन्दिरसमेत निर्माण गरिएको छ।
मन्दिरको अलावा तीन तले भ्यू टावरसमेत बनाइएको छ। चन्द्रागिरि हिल्ससम्म जान आउनका लागि ७०० रूपैयाँ लाग्छ। चन्द्रागिरि केवलकारमा हाल १५० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्।